" သၾကၤန္ကို ရက္ေ႐ႊ႕ၿပီးက်င္းပေစခ်င္တယ္လို႕ ရင္ဖြင့္လိုက္တဲ့ ထြန္းထြန္း " - Cele Connections
CeleConnections ပရိသတ္ႀကီးေရ ထြန္းထြန္းကေတာ့ အထူးမိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုတဲ့ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ အဆိုေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား တစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ေခတ္တစ္ခါက မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြသာမက ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြပါ အားေပးျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေယာက်ာ္းေလးအဆိုေတာ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ” Example ” အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့ မနက္ျဖန္မွာက်ေရာက္မယ့္ သၾကၤန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ” သၾကၤန္ကို ရက္ေ႐ႊ႕ၿပီးက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကိုေမွ်ာ္ေနမိတာ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းမဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္.။အခုအခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္ၿပီး စိတ္က်ဥ္းၾကပ္ေနရသမွ်ေတြကို ျပန္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ငါတို႔ျမန္မာေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သၾကၤန္ျပန္ႏႊဲခြင့္ရအုံးမွာဆိုပီးေတာ့ေလ.။အထင္အျမင္ကေတာ့တေယာက္နဲ႔တေယာက္မတူႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ. ဒါမဲ့လည္းအမ်ားဆႏၵကေတာ့ သၾကၤန္ကို ဒါေတြ ၿပီးသြားရင္ ဒီတစ္ႏွစ္ အတြက္ ရက္ကေလးျပန္သတ္မွတ္ေပးရင္ ေပ်ာ္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ဒီေလာက္ရႈပ္ေနရတဲ့ အထဲ အေပ်ာ္အပါးလာမက္ေနတယ္ေကာင္လို႔ စြပ္စြဲၿပီး မင္းကဘာနားလည္လို႔လညိးဆိုရင္ေတာ့အမ်ားႀကီးနားမလည္ပါဘူး. သၾကၤန္ဆိုတာ မူးၿပဲကြဲေသာက္စား တာထက္အမ်ားႀကီးပိုတယ္ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္.ဟူးေလာေလာဆယ္ေတာ့ေတာ္ေတာ္ဖီးလ္ေကြးေနတယ္.ေစာင္virus ” ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႕ ရင္ဖြင့္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ CeleConnections ပရိသတ္ႀကီးလည္း ထြန္းထြန္းနဲ႕ အေတြးတူရင္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
” သင်္ကြန်ကို ရက်ရွှေ့ပြီးကျင်းပစေချင်တယ်လို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း ”
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ထွန်းထွန်းကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေသာမက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေပါ အားပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ယောကျာ်းလေးအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ” Example ” အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပါ။
သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေကိုပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာလည်း အကယ်ဒမီဆုကို ဆွတ်ခူးထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါ့အပြင် နှင်းဆီအငြိမ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ မနက်ဖြန်မှာကျရောက်မယ့် သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ” သင်္ကြန်ကို ရက်ရွှေ့ပြီးကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုမျှော်နေမိတာ ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်.။အခုအချိန်မှာ စိုးရိမ်ပြီး စိတ်ကျဉ်းကြပ်နေရသမျှတွေကို ပြန်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ငါတို့မြန်မာတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သင်္ကြန်ပြန်နွှဲခွင့်ရအုံးမှာဆိုပီးတော့လေ.။အထင်အမြင်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ပါဘူးဗျာ. ဒါမဲ့လည်းအများဆန္ဒကတော့ သင်္ကြန်ကို ဒါတွေ ပြီးသွားရင် ဒီတစ်နှစ် အတွက် ရက်ကလေးပြန်သတ်မှတ်ပေးရင် ပျော်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလောက်ရှုပ်နေရတဲ့ အထဲ အပျော်အပါးလာမက်နေတယ်ကောင်လို့ စွပ်စွဲပြီး မင်းကဘာနားလည်လို့လညိးဆိုရင်တော့အများကြီးနားမလည်ပါဘူး. သင်္ကြန်ဆိုတာ မူးပြဲကွဲသောက်စား တာထက်အများကြီးပိုတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်.ဟူးလောလောဆယ်တော့တော်တော်ဖီးလ်ကွေးနေတယ်.စောင်virus ” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ရင်ဖွင့်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးလည်း ထွန်းထွန်းနဲ့ အတွေးတူရင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
“Covid ေၾကာင့္ အိမ္မွာ နားေနရတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ဝိတ္တက္လာတဲ့ သူမေလးကို ခ်စ္ေပးၾကပါလို႕ ဆုိတဲ့ မုဏ္း”